Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalada ka socda dalka ee warbixintooda aan helnay oo gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare laxaadleh
Dagaalada ka socda dalka ee warbixintooda aan helnay oo gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare laxaadleh
Posted by ONA Admin	/ November 16, 2013
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaallo aad u badan oo lagu jabiyay ciidamada maxaysatada ah ee gumaysiga Ethiopia, dagaaladaa oo dhacay intii u dhexeysay 27/10 ilaa 9/11 ayaa waxaa cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare laxaadleh oo isugu jira dhaimasho iyo dhaawac badan. Ciidanka lagaga dilay cadawga dagaaladaa inta la hubsaday ayaa waxay gaadhayaan 129 askari oo darajooyin kala duwan leh iyo dhaawac farabadan. Dagaaladaa ayaa waxay udhaceen sidan;
26/10/13 Bilcilbuur iyo Dhafoo oo Dhagaxbuur kawada tirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 15 askari 14 kalana waa lagaga dhaawacay.
27/10/13 Mareexaan oo dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 12 askari 23 kalana waa lagaga dhaawacay.
28/10/13 Kuusowliyo oo Iimay-bari katirsan dagaal kadhacay waxaa xiidamada cadawga lagaga dilay 6 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
29/10/10 Hiinsaraarka iyo Dibirowayne oo Fiiq kawada tirsan iyo Guban oo Dhuxun katirsan dagaalo kakala dhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay inta lahubo 8 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
30/10/13 Yoocalay oo Fiiq katirsan iyo Qudhacgaab oo Garbo udhaw dagaalo kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 6 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
30/10/13 Taaginduur oo Dhagaxbuur katirsan dagaal ay isku farasaareen CWXO iyo kuwa gumaysiga waxaa ciidanka saamalaluud ka ah ee gumaysiga lagaga dilay 20 askari 15 kalana waa lagaga dhaawacay.
31/10/13 Qudhacgaab oo Garbo katirsan waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 2 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/11/13 Shabeelay Gurayska oo dhagaxmadow kawada tirsan dagaallo kakala dhacay waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 14 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/11/13 Labidhiriqwayne oo dagmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay katirsan waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 3 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
6/11/13 Shabeelay oo Dhagaxmadow katirsan iyo Ganbadhka oo Sagag katirsan dagaallo kakala dhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 2 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
7/11/13 Qabrigaajo oo Shilaabo katirsan iyo Xaraar oo Qabridahare katirsan dagaallo kakala dhacay waxaa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 1 tiro kale oo aan faahfaahin lagahaynina waa lagaga dhaawacay.
8/11/13 Dagmada Shilaabo waxaa kugadoomay gaadhi uu cadawgu leeyahay waxaana halkaas kaga bakhtiyay 12 dhaawucuna wuxuu ahaa 8 askari oo looqaaday Qabridahare.
9/11/13 Goldalaad oo Dudumacadka u dhaw weerar balaadhan oo ay CWXO kuqaadeen kuwa gumaysiga oo dhibaatooyin ay dadka shacabka ah kuhayeen halkaas ujoogay waxaana lagaga dilay 40 askari 22 kalana dhaawacooda waxaa lageeyay dagmada Fiiq.